Tag Archive for "ए डिभिजन लिग" - ए डिभिजन लिग आज समापन हुँदै, इतिहास रच्ला त मनाङले ?
ए डिभिजन लिग आज समापन हुँदै, इतिहास रच्ला त मनाङले ?
काठमाडौं । ए डिभिजन लिग फुटबलको ४२ औँ संस्करण आज समापन हुँदै छ । ५ बर्षपछि भएको लिग फुटबलमा ३ बिभागीय सहित १४ टोली सहभागी छन् । रेलिगेशन नहुने लिगमा आजका अन्तिम २ खेल पछि ९१ खेल लामो लिग औपचारिक रुपमा सकिनेछ । यो सिजनको उपाधी मनाङ मस्र्याङदीले हात पारेको छ । संकटा दोस्रो र थ्रीस्टारले तेस्रो स्थानमा कायम रहेका छन् । आर्मी चौथो, एपीएफ पाँचौ र नेपाल पुलिस छैटौं भएका छन् । प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगल... थप पढ्नुहोस्
ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज दुई खेल हुदै
काठमाडौं । पल्सर सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज 'बुधबार' दुई खेल हुदैछ । लिगको १२ औ चरणको अन्तिम दिन मनाङले हिमालयन शेर्पा र संकटाले थ्री स्टारसंग खेल्नेछ । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो साँढे २ बजे संकटा र थ्री स्टार भिड्नेछन् । मैदान उत्रदै गर्दा दुवै टोलीको लक्ष्य लिगको उपविजेताका बन्नु रहेको छ । मनाङले दुई खेल अगावै लिग जितेर अन्य क्लबको उपाधि सम्भावनामा पुर्णविराम ... थप पढ्नुहोस्
शहीद स्मारक लिग : आजदेखि १२ औं चरणको खेल सुरु हुँदै
काठमाडौं । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सोमबारदेखि १२ औं चरणको खेल सुरु हुँदैछ । जस अन्तर्गत सोमबार ३ वटा खेल हुने छन् । ११औं चरणसम्म अपराजित रहँदै सिंग्नेचर मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले उपाधि जितिसकेकाले अब तालिकाको दोस्रो देखि पाँचौ सम्मको स्थानको भिडन्त खुल्ला भएको छ । एन्फा मैदानमा सोमबार बिहान ११ बजे अब एनआरटी र मछिन्द्र क्लब भिड्ने छन् । मछिन्द्र ६ अंक सहित १२ औं स्थानमा रहँदा एनआरटी ५ अं... थप पढ्नुहोस्
ए डिभिजन लिग फुटबल : त्रिभुवन आर्मीले सरस्वतीलाई हरायो
काठमाडौं । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले सरस्वती युवा क्लबलाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा छैटौँ जित दर्ता गराएको छ । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको टेक्निकल सेन्टरमा आज भएको खेलमा आर्मीले सरस्वतीलाई ४–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै लिगमा छैटौँ जित दर्ता गराएको हो । यो जितसँगै ११ खेल खेलेको आर्मीले २१ अङ्क जोडेको छ भने अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा यथ... थप पढ्नुहोस्
‘ए’ डिभिजन लिग : आज दुई खेल हुदै
काठमाडौं । पल्सर सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज 'शुत्रबार' दुई खेल हुदैछ । पहिलो खेलमा सरस्वती युथ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा दोस्रो खेलमा विभागीय टिम पुलिस र थ्री स्टारबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दुवै खेल ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा हुनेछ । दुवै खेलमा भिड्न लागेका चार टोलीको लक्ष्य भनेको जित निकाल्दै तालिकामा सुधार गर्नु हो । मनाङ आठौँ पटक लिग च्याम्पियन भएपछि बाँकी... थप पढ्नुहोस्
चीनको शानदोङ क्षेत्रमा लामो खडेरी, ...